Google Chromecast na gam akporo TV leaks ezigbo foto! | Gam akporosis
Nke a ga - abu Google Chromecast na - esote ya na gam akporo TV jikọtara!
Ahịa dongle na-eto eto. Ezie na ọ bụ eziokwu na Google kara akara mbido ya Chromecasts, anyị nwere ndị ọzọ, dị ka Amazon Fire TV Stick 4K, na mgbakwunye na Xiaomi Mi Stick a tụrụ anya ya. Ee, onye nrụpụta Asia ga-eweta ngwaọrụ ọhụrụ n'oge na-adịghị anya. Mana Google nwekwara ngwa agha na njikere.
Karịa ihe ọ bụla n'ihi na anyị na-anụ asịrị banyere ihe ọhụrụ Chromecasts site na onye na-emepụta ihe nke ga-abịa na nnukwu ihe ọ bụla: ọ nwere gam akporo TV. Ma ugbu a, a usoro nke ihe oyiyi a na-leaked egosi n'ụzọ zuru ezu otú a na ngwaọrụ ga-arụ ọrụ.
Ihe oyiyi mbụ nke Google Chromecast ọzọ na gam akporo TV
Iji malite, isi mmalite iyi mmiri a bụ ụmụ okorobịa XDA, ka anyi wee karia inabata ihe omuma ha ghapuru dika eziokwu. Naanị ihe ekwesịrị ịkọwapụta bụ na okwu Sabrina bụ aha koodu nke Chromecast a, nke nwere ike bụrụ akụkụ nke akụrụngwa akụrụngwa nke ndị nrụpụta Mountain View.
Site na onyonyo dị iche iche agbapụgoro, anyị nwere ike ịhụ na Chromecast ọhụrụ a ga-abụ ngwaọrụ nwere gam akporo TV, yabụ site na nke a dị mfe, anyị ga-enwe ezigbo akpa igwe gam akporo TV Box iji nwee ike ịgbanwe telivishọn ọ bụla n'ime akara ọhụrụ TV.
Ma kedu otu ị ga-esi na-agagharị na mkparịta ụka Chromecast na gam akporo gam akporo TV? Ọfọn, site na njikwa ntanetị nke ọ na-ejikọta nke ga-enye gị ohere ịnweta ụdị arụmọrụ niile. Na mgbakwunye, dịka ị pụrụ ịhụ n ’onyogho nke na - achị ahịrị ndị a, anyị na - ahụ na ime obodo nwere bọtịnụ raara onwe ya nye rụọ ọrụ Google olu nnyemaaka, site na ihe anyị ghọtara na ọ ga-enwe igwe okwu arụpụtara.
Ugbu a, naanị ihe anyị nwere ike ime bụ ichere, n'ihi na ngwaọrụ a ga-abụ otu n'ime bọmbụ nke afọ. Mana, ọ dị mkpa na ọnụahịa mmalite nke Chromecast ọhụrụ a gbanwere, n'ihi na ọ ga-abụ eziokwu gam akporo TV Box na-egbu egbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Nke a ga - abu Google Chromecast na - esote ya na gam akporo TV jikọtara!
Galaxy Z Flip natara mmelite nche June
Foto Google gosipụtara anyị mgbe a ga-ehichapụ foto ndị dị na ahịhịa na-adịgide adịgide